OsoteMapi | OsoteMapping ™ Akaebe
"Nnukwu Q na A na -esochi nnọkọ isi okwu gị, daalụ, dị ka mgbe niile ị nwere ike ịza ajụjụ ọ bụla nke jiri ụdị okike na -adọrọ adọrọ, na -alaghachi azụ nyocha na usoro gbasara ọdịnihu ọrụ, ụkpụrụ ndị ọrụ. yana ihe ọ pụtara nye ndị ndu yana iji ihe ndị a wee zaa nzaghachi dị mma maka ihe dị n'uche ndị isi anyị.
Ebumnobi anyị bụ isi mgbe anyị jiri isi ihe mebere wee mee bụ ịkpasu echiche n'etiti ndị isi obodo anyị maka njem mgbanwe anyị na ịgba ume echiche n'etiti ndị otu gbasara ụzọ arịrịọ ha dị ka ndị isi na -agbanwe na otu ọrụ onye ndu. kwesịrị ịmalite iji zute eziokwu ọhụrụ.
Echere m n'onwe m na anyị enwetala ebumnuche anyị, nnọkọ nke ọ bụla dị iche mana ọ nweghịkwa ihe bara uru n'ụzọ nke ya n'ihi na ị nweela ike jiri amamihe megharịa nzaghachi gị na ntuziaka nke otu ọ bụla were.
Daalụ ọzọ, ọ ga-adịkwa mma ijikọ ọzọ n'ọdịnihu iji chọpụta ohere iji tinye ndị na-ege anyị ntị ka mgbanwe anyị na-aga n'ihu.
Ọdịnihu dị ugbu a! ”
- Mmiri Scottish
Anyị anatala ezigbo nzaghachi sitere na ndị nnọkọ a na-ahụ maka ahụmịhe ha, nke a bụ ihe ha na-ekwu banyere nnọkọ gị:
Retụgharị uche m otú m si eji oge m eme ihe. ”
“Mmetụta ndị ndu. Onye ọ bụla bụ onye ndu n'ọdịniihu ọrụ n'agbanyeghị aha ya. ”
“Echiche siri ike na ihe kpatara kpatara mmadụ ga-eji mee otu ụzọ ahụ.”
“Ọfụma ụmụ nwanyị dị mkpa n'ọdịnihu ọrụ.”
I meela ezigbo mmetụta!
Na nke a bụ nzaghachi sitere na ndị otu m:
Isi okwu Cheryl nwere ezi obi, ọ na-akọrọ n'ihu ọha akụkọ onwe onye masịrị ndị sonyere anyị. Anyị nwere ekele maka njikọ ya n'etiti ọrụ na ndụ n'ezie; kedu ka ihe si aga ná ndụ gị bụ otu akụkụ nke otu anyị si etinye aka na ọrụ. Ọ maara nke ọma na-adọkpụrụ izipu ozi yana nyocha ya nke na-akwado isi ihe ya. Akwụkwọ ọrụ Cheryl bụ ezigbo ihe enyemaka maka iduzi onwe onye na nkwadebe maka ụdị ọrụ nke ọdịnihu nke ọrụ anyị.
Mepụta ihuenyo na-acha akwụkwọ ndụ na mmepụta ọkachamara mere ka isi okwu a dị mma dị ka ịme ka ọ na-ekwu okwu n'ihu mmadụ!
Daalụ ọzọ maka itinye uru dị egwu dị n'usoro nnọkọ a! M ga-anọgide na-agbaso ọganihu gị ka ị na-aga n'ihu ịnye nnukwu nghọta maka ọdịnihu ọrụ.
C. Schroeder - Onye isi, CME
Rave ndị bịara nyocha maka Cheryl's Virtual Keynote si Enbridge Gas Leadership Development Event:
“Ekelere m ndị otu maka ịhazi ihe omume a. Ọkà okwu ahụ na-etinye aka ma na-enye ndụmọdụ ndị bara uru. ”
Achọpụtara m na ọkà okwu nwere ume ma ọ nyere ụlọ ọrụ anyị ndụmọdụ dị mkpa. ”
“E kwesịrị idela Cheryl akwụkwọ ruo ogologo oge!”
"Cheryl okwu okwu gi nke oma bu ihe di nkpa na ogbako anyi - daalụ maka nlekọta, nhazi na isi okwu."
Ihe omume Planner - ServiceNow
Nyocha maka Rail maka Virtual Keynote sitere na EBAA 2020 Nnọkọ Nnọọ na Ntaneti:
"Nke a bụ ihe magburu onwe ya ngosi na oge agaraghị mma na ugbu a nsogbu niile anyị na-enwe."
“Enwere m mmasị na sọftụwia nke onye isi okwu jiri mee ihe - ma eleghị anya ọ bụ ahụmịhe kachasị mma m hụtụrụla (ma dịkarịrị anya na ahụmịhe mmadụ). Ichegharị oyiyi ya dị ka nke dabara na ihe ngosi ya. ”
Enwere m mmasị n'iji Cheryl ekwu okwu n'elu ikpo okwu nke mere ka ọ dị mfe ịgbaso ihe ngosi ya ma mebie nkwenkwe ahụ. ”
"Ihe Cheryl kwuru banyere ịchọ ịghọta na ịchọta otu ihe na-esiri anyị ike, kama ịlaghachi azụ na ịnwa ịlụ ọgụ maka ihe ndị ahụ, bara uru na oge maka ụlọ ọrụ anyị."
Oge mụ na Cheryl na-enwe dị egwu ma na-akpali akpali. Ntuzi ọgụgụ isi na ọgụgụ isi ọhụrụ ga-enyere ndị otu aka, ma ọ bụrụ na ha anaghị eji ụdị ahụ eme ihe, ga-eme nke ọma na iwulite otu otu
“Ọ na-adị m ka m nwere ume, m ga-elekwasịkwa anya n'ọdịnihu karịa ka m nwere n'oge!”
"Akwa nti edu ndu."
Okwu Cheryl na-atọ ụtọ n'ezie, amụtakwara m ndụmọdụ m ga-eji na-arụ ọrụ. ”
“Nnukwu isi okwu magburu onwe ya!”
"Ezigbo onye na-ekwu okwu n'oge - enwere m mmetụta nke inwe mmekọrịta n'etiti ọha mmadụ mgbe nnọkọ a gasịrị."
"I meela, Cheryl maka igosi / igosipụta echiche gị - ngosipụta dị ukwuu!"
“Cheryl hụrụ m n'anya!”
"Echere m na NextMapping dị oke mma ma dịkwa ezigbo oge. ”
“Oge kwesịrị ekwesị maka okwu a!”
Mma mma nte enye ekesitịn̄de ikọ ke ini iso. Nzụlite ya ewepụghị ihe ngosi slide ahụ n'ihi ya. ”
“Hụrụ nke a n'anya. Ọ dị mkpa imesi mmetụta ọmịiko ike. ”
Ntuli aka mmekorita ndi mmadu mere ka ndi mmadu weputa ihe ngosi. ”
"Okwu n'okwu bụ onye maara ihe nke ọma na ọ ga-akwado maka ọdịnihu."
“Nke ahụ dị mma! Usoro ihe omume gi memere ka ihe na-eme ma na-akpali ma na-eme ka ndị na-ege ntị na-adọrọ adọrọ niile. Ọ bụ ntụpọ. ”
Onye isi oche - EBAA
Onye isi - NWLS
“Ọ magburu onwe. Daalụ! Na ekele ọzọ maka oke ngosi, pọdkastị na ọkụ ọkụ. Enwetala m ọtụtụ nzaghachi ziri ezi na niile. Daalụ ọzọ!"
H. Wetzel, Sr. Director Trade na Member Communications - NRECA
Nweta usoro nyocha sitere na BMO Ọhụụ nke Ndị Na-eme Ọrụ:
"Nnukwu mmụta na echiche na-akpali echiche n'ụtụtụ a na Ọdịnihu nke Ọrụ - Daalụ."
“Cheryl nwere ezigbo ọ weụ na anyị nwere ike ịkpọtara gị ndị ahịa anyị gafee Canada, nyocha gị na nghọta gị ga-aga n’ihu ebe ụwa na-aga! Ọ bụghị naanị nke ahụ, mana ị nwere ezigbo obi ụtọ ịrụ ọrụ. Ọ bụ ihe obi ụtọ. ”
"BMO kwadoro nzukọ" Ọdịnihu nke Ọrụ - Otu esi abụ Onye Ndú Nduzi Ọdịnihu "n'izu a site n'aka Cheryl Cran. Na ụwa nke akpaaka na digitization, ọ dị mkpa ịghọta na ọganihu na teknụzụ na-eme ka ohere ịga nke ọma nwee, yana ịnwe ndị otu kachasị mma na-agbanwe agbanwe ma nwee ike ịnakwere mgbanwe ga-eweta ụgwọ ọrụ, ọ bụghị ibelata ọrụ. Ọ bụ maka ime ka ndị otu nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma ma lekwasị anya na mkpa azụmahịa. Otu onye ahịa gwara m otu oge na ọ chọrọ ịkwụsị obere akụ na ụba na azụmaahịa - nke ahụ bụ usoro iji bụrụ ọrụ n'ọdịnihu.
“I meela, Cheryl, maka ebe mmụta dị nnọọ mkpa. Prov kpaliri a otutu nke ngosipụta si ma anyị ahịa na ndị ọrụ anyị na-abịa taa. Ọzọkwa, daalụ maka akụkụ na-adọrọ mmasị nke dị n'akụkụ: mmekọrịta dị n'etiti akpaaka na UBI —nkparịta ụka dị ukwuu! ”
“Akwa omumuihe banyere ọdịnihu njikere òtù na-eme n'ọdịnihu njikere ndú! Ọnụ, ka anyị gbanwee echiche “mụ” ka ọ bụrụ nke “anyị”! Enwere m nnukwu ekele maka ihe ọmụma ị kesara n'oge ogbako ahụ. Apụghị m ichere ịgụ akwụkwọ gị! ”
“Otu ụtụtụ na-akpali akpali ma na-ekere òkè na ndị ahịa anyị BMO Financial Group Canada Commercial Banking and Cheryl Cran. A ghaghị iji nkà na ụzụ rụọ ọrụ iji kwadebe maka ọdịnihu na-elekwasị anya n'otú teknụzụ nwere ike isi bulie nsonaazụ maka ndị mmadụ. Ọ bụ ahụmịhe mmeghe anya iji mụta otu ị ga - esi mee ihe ozugbo iji mee ka ndị otu zụta, ime mgbanwe na ogbugbu. ”
"Cheryl isi okwu gị na," Change Leadership & The Future of Work, "zuru oke maka otu ndị isi anyị na ndị mmekọ ụwa niile.
Ndị otu anyị nwere obi ụtọ ịnwe gị na isi ụlọ ọrụ Las Vegas ma anyị nwere ọtụtụ nzaghachi dị mma site na onye ọ bụla nọ na saịtị ahụ na site na ndị na - eso ndị na - aga n'ihu iyi.
Anyị hụrụ ọtụtụ mkparịta ụka Twitter banyere ụfọdụ n'ime atụmatụ gị banyere ndu mgbanwe na ọdịnihu dịka 'ndị na-amụ akwụkwọ' na ịkụda silos.
Anyị niile chọburu ka anyị nwee oge ịnọnyere gị!
Ka anyị nọrọ na aka maka imekọ ihe ọnụ n'ọdịnihu - daalụ ọzọ. ”
Onye isi njikwa ụwa, ogo - teknụzụ Aristocrat
Rave 'ederede' nyocha site na ndị bịara nzukọ ASQ:
“Nke a bụ ngosipụta kacha mma, kachasị mma nke ọgbakọ a dum.”
“Nke a bụ nnukwu ụzọ iji kwalite nsonye ma nyere ndị mmadụ aka ige gị ntị n'ezie. Daalụ maka ịkekọrịta usoro ọhụụ a na ọdịnaya dị mma. ”
“Ike gị na positivity na-agba m ume. Enwere m mmasị ijikọ ma nweta ndụmọdụ gị. ”
"Ihe dị egwu, ihe kwesịrị ncheta, na-edozi ahụ, na-akpali echiche - Daalụ"
"Daalụ! Aga m. Akwa ngosi taa. Ro mere ya jijiji !! M ga-eji obi ụtọ gụọ akwụkwọ gị. ”
“Obi dị gị ụtọ na ị dị njikere ịkekọrịta ihe ngosi gị na ihe ndị ọzọ. Ọ na-egosi gị obi ike & bụghị nchegbu banyere na-eke dị nnọọ ize azụmahịa. ”
“Nsọ! @ $ & Pụtara ìhè ngosi! Daalụ."
“Hụ mmekọrịta na ume ọhụrụ ume”
“Were dị egwu!”
"Oh Super inyom - Daalụ maka re-mesie ike na" mgbanwe bụ iwu nke ndụ ”
“Insp na-akpali m, Cheryl!
“I sitere n'ike mmụọ nsọ m!”
“Ọ mara mma! Ikwuritakwara ihe banyere nke a n'oge nkwupụta gị. Daalụ nke ukwuu maka ịgbanye anyị taa. Agbanwewo m. ”
"I meela, ị dị ike ma na-akpali akpali."
“Nnukwu mmekọrịta. Daalụ maka ịbụ nke mmụọ nsọ na nke bara uru! Ọ bụ ihe magburu onwe ya. ”
“Hụrụ ya n'anya. O doro anya na ihe kachasị na ogbako ahụ. Daalụ!"
“Nnukwu isi okwu !!! Enwere m uche! Nnukwu ọchị, amamihe, itinye aka na mmụọ nsọ dị ka ọ na-adị. Nke kacha mma ugbu a! ”
“Presentationtụle ịtụnanya gị ọdịnihu ọdịnihu na-efe efe. Daalụ maka ịgba ume anyị. ”
“Oge kachasị mma! Ike ma na-akpali akpali ”
“Cheryl bụ onye isi mmalite mmalite okwu nzụkọ mmemme anyị na Innovation Unplugged Skills Summit na Toronto.
Site na mkparịta ụka mbụ anyị mere ka o doo anya na Cheryl maara nke ọma na Ọdịnihu nke Ọrụ wee wepụta oge iji ghọta ebumnuche nke nzukọ anyị na ihe omume anyị. Ihe ngosi ya na-adọrọ mmasị ma na-ezi ihe ma setịpụ oge izu ike anyị n'ụzọ zuru oke. Anyị nwere ndị na-ege ntị dịgasị iche nke gụnyere ụmụ akwụkwọ sekọndrị, ndị nkuzi, ndị ọkachamara n’ọrụ ụlọ ọrụ na ndị ọrụ gọọmentị. Onye obula wepuru ihe n'okwu Cheryl wee kwuo okwu banyere ike ngosi a na nzaghachi ha. M ga-anabata iso Cheryl rụkọọ ọrụ n'ọdịnihu. ”
Namir Anani - Onye isi oche ICTC na Onye isi ala
Okwu a na-ekwu okwu nke ọma tọrọ m ezigbo ụtọ. Enwere m obi ụtọ ozugbo ma hụ mmekọrịta ahụ n'anya. Nke kachasị, agụụ gị maka ọdịnihu na ọrụ na azụmaahịa mere ka ihe ngosi gị bụrụ nke a na-agaghị echefu echefu. Biko mee ka m mara maka ihe ga - eme n’ọdịnihu na ọrụ ị ga - eme na ya. Ọ ga - amasị m ịnụ ka ị na - ekwu maka ihe ọhụrụ na teknụzụ.
Ọ bụ ihe ọ aụ n'ezie ịnụ ka ị na-ekwu okwu. Enwere m olileanya na anyị ga-ahụ, n'ọdịnihu dị nso. ”
Ọbịa nke 9 - ICTC Innovation Summit
“Cheryl bụ onye isi okwu mmalite anyị maka Ọzụzụ Nduzi Ọchịchị AGA kwa afọ ma bụrụ ihe ịtụnanya!
Akpọrọ isi okwu ya, "The Art of Change Leadership - How to Flex in Flux" na ozi ya bịara n'ezi oge ma baa oke uru nye ndị sonyere anyị. Anyị nwetara nzaghachi dị mma sitere n'aka otu anyị gbasara ụdị nnabata Cheryl, ịtụ vootu na mmekorita Q&A, yana nyocha ọ zigara ndị sonyere iji mata ndị na-ege ya ntị ma hazie ihe ngosi ya. Isi okwu mmalite nke Cheryl ji nnukwu ume wee malite ọgbakọ anyị - anyị hụrụ vidiyo na egwu ndị mere ka mmadụ niile nwee ọ excitedụ ụbọchị niile. ”
J. Bruce Onye Nduzi nke Nzukọ
Cheryl Cran bụ onye isi okwu anyị kwuru maka mmemme ịdu ndu anyị kwa afọ ma n’okwu ọzọ ọ pụtara ìhè. Echiche pụrụ iche Cheryl banyere ọdịnihu nke ọrụ yana ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ ịnọ na-eduga butere uru dị ukwuu maka otu anyị. O wepụtara oge jụọ onwe m na ndị otu ndu otu ọdịbendị anyị dị iche na otu esi eme ihe anyị na-eme nke ọma. Ndị ndu anyị nyere mkpịsị aka aka abụọ maka ụdị nnyefe Cheryl nke na-eme ngwa ngwa, na-aga n'ihu ma na-agbanwe agbanwe. Tụkwasị na nke ahụ, ndị isi nwere obi ụtọ na Cheryl sonyeere anyị maka nnọkọ mgbede anyị. Ihe m chọtara dị oke ọnụ ahịa dị ka onye isi ụlọ ọrụ ahụ bụ nyocha tupu ihe emee na ọ webatara ya n'okwu bụ isi yana ezigbo ntuli aka na ozi ederede nke na-etinye aka na otu ndị isi anyị. Cheryl ekwughị naanị banyere ọdịnihu na ọnọdụ ọ na-enye anyị n'ezie mgbanwe iji duru anyị ụzọ iji mepụta ọkwa anyị gara nke ọma. "
B. Batz Onye isi ala, Fike
“Apụghị m ikele Cheryl nke ọma maka isi okwu mmụọ ya na nke mmụta banyere ịmasị ndị na-eme mgbanwe na JLT Canada Public Sector Summit 2018. Oge ya ga-adaba na ndị na-ege anyị ntị obodo, mana dịka otu puku afọ na-achọ ịbụ onye mgbanwe mgbanwe otu ụbọchị, Oge Cheryl rutere nke ọma n'onwe m. Ndị nnọchianya anyị enweghị ike ịkwụsị ikwu okwu banyere ihe mmekọrịta ya na nkwupụta ya - ọ bara ezigbo uru dị ka ụzọ iji jikọọ mmadụ niile, n'ụzọ nkịtị!
P. Yung Azụmaahịa na Nkwukọrịta, Jardine Lloyd Thompson Canada Inc.
“Cheryl bụ onye na-ekwuchitere anyị okwu mmechi kwa afọ maka ọgbakọ TLMI. Ọ bụ nnukwu onye otu anyị - isi okwu ya nyere nghọta na nyocha banyere ọdịnihu nke ọrụ dabara na otu a na-eme elu. Anyị hụrụ n'anya Cheryl tinyere mmetụ pụrụ iche dịka eserese nke nnabata ọbịa anyị n'anyasị ahụ ma ọ kpọtụrụ otu n'ime ndị otu anyị ihe ịga nke ọma ma na-enyekwa nghọta nghọta. Mkpakọrịta ederede na ịme ntuli aka pụrụ iche ma gbakwunye ọkwa dị elu nke nsonye nke ndị na-ege ntị. Anyị nwere mmasị iso Cheryl rụkọọ ọrụ, ndị otu anyị hụkwara ya n'anya. ”
D.Muenzer Onye isi ala, TLMI
“Cheryl Cran bụ onye na-ekwu okwu mmeghe na 2018 CSU Facilities Management Conference na ọ bụ onye ama ama! Ozi ya banyere mgbanwe, obi ike na imekọ ihe ọnụ bụ ihe ndị otu anyị chọrọ ịnụ. Ighapu ihe oghaghi n'ihu bu mgbe mmadu matara na obu ihe ngbago. O keriri ngwa ọrụ anyị niile nwere ike weghachite ma tinye ozugbo maka mmụba ndị otu. Eji Cheryl jiri ederede na ndị na-ege ntị na ntuli aka nwere ekele dị ukwuu ma otu anyị jiri aka ya na-arụ ọrụ. Ahụrụ m n'anya otú Cheryl si jiri obi ya niile zaa ajụjụ niile ederede ederede gụnyere ndị siri ike. Ajụjụ ederede na-ede ederede gbara ọha mmadụ ume iji gosipụta nchegbu sitere n'obi. Ọtụtụ ndị bịaranụ sitere na ederede na Twitter kwuo na mmeghe oghere oghere dị egwu nke Cheryl setịpụrụ ụda maka nnọkọ ụbọchị abụọ na-aga nke ọma. "
N.Freelander-Paice Director nke Isi Mmemme, Mahadum California State, Office nke Chancellor
“Cheryl Cran bụ Ezigbo 'Real Deal'
Enweghị ọkà okwu mkpali dị mma, ọkachamara mmụta akparamaagwa nke ọgbọ, na onye ndu mgbanwe mgbanwe karịa Cheryl Cran. Cheryl bu onye kwesiri ntukwasiobi, nwe obi eziokwu, n’egosiputa, ma nwekwaa ihu oma dika o na akuko ihe omuma ya na ndi ahia na oru nke ugbua.
Enweghị m ohere ịkọwa ya na ụlọ ọrụ Fortune 100 ọ bụla na-eme mgbanwe dị ukwuu na ọrụ ọrụ ha.
Thewa ga-abụ ebe ka nnọọ mma ma ọ bụrụ na ha agbasoo ndụmọdụ na aro Cheryl na-enwe olileanya metụtara ndị ọzọ na otu esi anagide. ”
C. Lee Onye isi ala, Ndị otu ọrụ Raytheon
“Cheryl Cran bụ onye isi okwu anyị na nzukọ onye ndu anyị na isi okwu ya nke isiokwu ya bụ: ramkwalite Ọdịnihu Anyị - Na-eduga Mgbanwe Iji Nweta Enwere ozi ya na nnyefe ya dabara adaba maka otu anyị.
Ihe nyocha Cheryl banyere ọdịnihu ọrụ na mgbanwe ndị isi kwesiri ime iji wee ebe ahụ bịara n'oge kwesịrị yana maka ndị otu anyị. Nchọpụta ya yana nnyefe siri ike mepụtara uru dị ukwuu maka ndị isi anyị nwere ọgụgụ isi. Ndị otu anyị sonyekwara n'iji ederede ederede na ntuli aka Cheryl tinyere na ntinye ya. N'ike mmụọ nsọ ya na echiche ndị a na-emegharị ahụ bụ naanị ole na ole n'ime nkọwa okwu Cheryl.
Ihe omume anyị na-edu ndú bụ nnukwu ihe ịga nke ọma na anyị na-agụnye isi okwu Cheryl dị ka ihe pụtara ìhè na ọganihu zuru oke. ”
B. Murao Onye nnọchi anya nyocha, nyocha nke BC
"Cheryl Cran bụ onye isi okwu anyị na ogbako ndu anyị na isi okwu ya nke akpọrọ:" Art of Change Leadership - Mee Ka Ọ Mee Ka Ọ Dị Ihe "bụ nnukwu ihe ịga nke ọma na ndị otu ụlọ ahịa anyị.
R. Nlekọta COO, Rubicon Pharmacies
“Cheryl Cran bu onye isi okwu anyi noo na ogbako MISA BC nke oge a maka ndi okacha amara nke IT - isi okwu Cheryl bu ihe ndi otu anyi!
Enwere m ekele maka ọtụtụ ihe na isi ihe Cheryl - enwere ọdịnaya zuru oke, nyocha na echiche yana mmụọ nsọ.
Nzaghachi site n'aka ndị bịara anyị bụ ihe ịtụnanya na ha nwere ekele maka ike ịdegara Cheryl ajụjụ ya na azịza ya doro anya na ịtụ vootu iji mee ka ndị otu ahụ.
Ndị bịara ezumike mmetụta Cheryl nwere ume, nyere mmụọ mmụọ ma dịkwa njikere iwere echiche na imeghachiri ebe ọrụ ma tinye ha ozugbo maka mmụba ịga nke ọma.
Cheryl karịrị ihe anyị tụrụ anya ya! ”
Crabtree Kọmitii Mgbakọ, Ndị Ọrụ Usoro Ọchịchị Ozi Ọchịchị nke BC (MISA-BC)
“A na m akwado Cheryl Cran ka ọ bụrụ ọdịnihu nke ọrụ ma gbanwee ọkachamara iduzi ndị ga - enyere gị aka ịnyagharị ọdịnihu gị n’ụwa mgbanwe a. Enweela m ezigbo ndị nkuzi n ’afọ niile m nọ n’ụlọ akwụkwọ. Nnukwu ndị nkuzi doro anya mgbe ị hụrụ nsonaazụ na otu ndị mmadụ n'otu n'otu na-arụkọ ọrụ ọnụ dịka otu njikọta. Egwuregwu, egwu, ịgba egwu - ha niile nwere ụgwọ ọrụ na mmata maka nnukwu ndị nkuzi. Nkuzi m na-emere ndị ọrụ m abụrụ obere ihe egwuregwu. Amaara m na ọ bụrụ na m chọrọ ịrụ ọrụ nke otu ọkachamara ọkachamara, achọrọ m ọkachamara nchịkwa. Cheryl Cran bụ nke MyMutual's Leadership Team. Anyị zutere Cheryl Cran na 2014 mgbe a gwara ya ka ọ bụrụ onye isi okwu na Seminar Seminar anyị kwa afọ. Cheryl bịara n'isi ụtụtụ, zutere ndị bịaranụ wee nye isi okwu dị egwu na Leading Change. Cheryl bụ ọkà okwu isi okwu kachasị elu. Zọ nke abụọ m si mara Cheryl dị ka onye nchịkwa Executive. Ọ bụrụla onye nchịkwa na onye nkuzi na uto m dịka onye isi. Ma ugbu a, ọ bụ onye nchịkwa ahụ maka otu ndị isi anyị, na-ama anyị aka ma na-aza anyị ajụjụ. Ndi otu ndi ndu anyi na-ewere Ọzụzụ Onye ndu NextMapping N'ezie Cheryl Cran nyere. Usoro ọzụzụ ahụ dị na ntanetị ma tinye otu na oku otu onye nkuzi. Anyị na-enwe ike itinye ihe anyị na-amụta n'ọnọdụ ezigbo ndụ site na nkwado nke onye nkuzi maka ndị otu anyị. Specificzọ ndị nkuzi na ndụmọdụ nke Cheryl siri nyere aka bụ:
Nkọwapụta na ebumnuche anyị na ọhụụ nke nyerela anyị aka ịbawanye uru nke ndị ọrụ na ndị ahịa
Nduzi banyere inwe 'ndị ziri ezi' na otu ahụ iji chụba azụmahịa ahụ n'ọdịniihu
N'ike mmụọ nsọ na akụrụngwa doro anya iji nyere anyị aka iku, zụọ ma zụlite ndị otu anyị
Nhazi ndi otu ochichi iji bulie oru aka, otu ndi otu na ijide ihe mgbaru oso
N’inyere anyị aka ịbawanye echiche echiche, mepụta omenaala idu ndú ma bulie ndị ọrụ
Enwekwu ume na obi ụtọ banyere ọdịnihu na otu anyị nwere ike isi mepụta ya n'otu egwuregwu ”
V. Fehr - Onye isi oche MyMutual Insurance
“Anyị nwere Cheryl azụ nke ugboro abụọ iji kwado na isi anyị kwa ụbọchị 1.5 ụbọchị mgbagha maka anyị obodo ọrụ, họpụtara bi, obodo azụmahịa na ndị ọzọ na obodo nketa oke, na ọ bụ nnukwu ihe ịga nke ọma. Anyị nwere ndị bịara ya kwuru na ọ ka mma n'afọ a karịa afọ gara aga ma ọ bụ ihe kpatara Cheryl ji aka ya na ndị ọkachamara ọkachamara, mmekọrịta ya na ndị sonyere ya na nkwadebe. Cheryl kwuru na onye ọ bụla na-ekwu okwu ọbịa na usoro ihe omume ahụ tupu ihe omume ahụ wee hụ na usoro a gafere ka ọ nwee mmetụta kachasị na mkpochapụ ahụ. Isiokwu anyị bụ 'NextMapping' ọdịnihu nke ọrụ gụnyere ihe ọhụrụ, teknụzụ, onye ndu na ọdịbendị. Okwu okwu ya n'okwu ya n'oge niile na-agbagha gụnyere oghere, mmechi nke otu ụbọchị na mmechi nke ụbọchị abụọ. Cheryl nwere ikike pụrụ iche iji weta usoro dị mkpa ma na-akpali akpali nke na -emepụta ma azịza ọhụụ yana ụzọ dị mma iji tinye echiche ndị a na-ekerịta. N’isi edemede ya mepere emepe, o setịpụrụ ụda na-akpali akpali maka ọdịnihu nke ọrụ gụnyere mmetụta nke teknụzụ na otu ndị mmadụ kwesịrị isi gbanwee oge ọsọ ọsọ nke mgbanwe. Isi okwu mmechi ya n’ụbọchị nke mbụ lekwasịrị anya na NextMapping ọdịnihu nke onye ndu yana ihe ọ pụtara n’ọdịnihu ọrụ maka ndị otu na ndị ọchụnta ego. Ndị na-ekwu okwu na nnọkọ ahụ kpuchiri obodo ndị mara mma, azụmaahịa klaasị ụwa, ihe ọhụrụ, echiche okike, nchekwa nchekwa dijitalụ, drones na ndị ọzọ. N’ụbọchị nke abụọ, Cheryl chịkọtara ụbọchị ahụ na ọkara ahụ wee webata ihe ndị dị mkpa site na onye ọ bụla na-ekwu okwu n’ime okwu mmechi ya. Oge ọ bụla anyị na Cheryl rụkọrọ ọrụ, anyị eritela uru site na mmụbawanye ụba, yana ọrụkọ ọnụ n'ime ndị otu obodo anyị. Anyị na-ahụ Cheryl dịka akụkụ dị mkpa nke ihe ọhụrụ anyị na-eme kwa afọ ma na-atụ anya iso ya rụkọọ ọrụ ọtụtụ oge n'ọdịnihu. ”
W. Foeman - Ọdee obodo Obodo Coral Gables
"Cheryl bụ onye isi okwu anyị na UVA Wise Economic Forum wee gosi ya" Ọdịnihu nke Ọrụ Bụ Ugbu A - You Dị Njikere? " Nzaghachi nke ndị na-ege anyị ntị gụnyere nkọwa dịka: “Ọhụhụ dị egwu na nke na - akpali akpali maka ọdịnihu” “Hụrụ ngwakọta nke ihe bara uru yana ntinye aka iji nyere anyị aka ịdịkwu ọhụụ” “Echiche dị oke egwu banyere otu anyị nwere ike isi mepụta ma bawanye ezigbo oge okike maka ihe ịga nke ọma n'ọdịnihu "" Nnyocha magburu onwe ya na ọnụ ọgụgụ maka ọdịnihu nke ọrụ yana mkpa ọ bara maka agụmakwụkwọ na azụmaahịa "" Site n'ike mmụọ nsọ Cheryl Cran "Anyị ga-enwerịrị Cheryl azụ iji nyekwuo nghọta maka ọdịnihu nke ọrụ, ihe ọhụrụ na mgbanwe onye ndu.
B. Joyce University Virginia na Wisdom
“Cheryl Cran bụ onye ama ama n’ọgbakọ ISBN anyị. Oge Cheryl zuru oke maka otu ndị isi C-Level n'ihi na ọ nyeere ha aka ịhazi ogbako juputara n'echiche n'ime usoro dị mkpa iji mee ka nzukọ ha gaa n'ihu. Otu anyị nwere nghọta ma nwee ike ịkatọ ndị na-ekwu okwu na mpụga ụlọ ọrụ Saloon na ụlọ ọrụ spa, mana isi okwu Cheryl dị mma ma nwee ego. Cheryl ahaziri ya isi okwu maka ìgwè anyị, Ọdịnihu nke ọrụ dị ugbu a - lonlọ Mmanya Gị Jikere? na ozi ya bu usoro nyocha zuru oke, echiche di nkpa, ihe omuma na-eleba anya n’odinihu nakwa n’ikwado maka nkpesa di n’ihu. N'adịghị ka ọtụtụ isi okwu, Cheryl gosipụtara ngwa ngwa teaser, gụnyere vidiyo blọọgụ ma nyekwa ya nyocha ndị bịara ya yana iduzi ntuli aka na-ebi ndụ yana gụnyere nzaghachi ha na isi okwu ya. Anyị nwekwara Cheryl ịkwado mkparịta ụka na-adọrọ adọrọ na-adọta ndị ọkachamara na ndị otu ya na-eguzo naanị. Anyị agaghị ala azụ ịgwa ya ndị ọzọ. ”
Onye isi oche V. Tate International Salon Spa Network Network
“Cheryl Cran bụ onye isi okwu anyị na onye nkwado mmebe ọgbakọ Calgary Stampede Leadership Summit. Isi okwu ya: Otu Ndị Jikere Njikere Ọdịnihu - Otu esi emepụta agile, ndị na-eme mgbanwe na ndị ga-aga n'ihu na-aga n'ihu dị ịtụnanya ma na-echebara ndị isi anyị echiche.
N'oge ogbako a, otutu ndi ndu anyi n’ekere Cheryl ozi n’oge isi okwu ahu ma ha nwere ekele maka nkowa ya nke oma na ezi nzaghachi. Ndi ndu anyi nwere obi uto banyere ihe di n’ime ya ma nwekwaa ike itinye ihe ha na-amuta n’oru ha. Oge na nlekọta Cheryl na ịkwadebe na ijide n'aka na ya na ndị otu anyị nọ nwere nnukwu ekele nke ukwuu gụnyere nyocha ya tupu ndị bịara ya, ntuli aka mmekọrịta n'oge isi okwu yana ozi ederede nke ajụjụ. Cheryl gosipụtara ihe ọ dị ka iji nweta teknụzụ mgbe ọ na-emetụta ma na-akpali ndị mmadụ isi 'm gaa anyị'.
Cheryl nyere echiche magburu onwe ya banyere usoro ọdịnihu ga-emetụta azụmaahịa yana o nyere ụfọdụ echiche okike banyere otu anyị ga-esi nwee ike ịga nke ọma anyị. Cherzọ Cheryl si dị nghọta, nyocha dabere na mmekọrịta mmekọrịta nke kachasị mma maka otu ndị ndu anyị nwere nghọta. “
D. Bodnaryk - Onye Nduzi, Ọrụ Ndị Mmadụ
Ngosipụta Calgary na Stampede Ltd.
Enwere m obi ụtọ ịme Cheryl Cran maka nnukwu ìgwè niile ụlọ ọrụ mkpara, gụnyere ọtụtụ narị ndị ọrụ. Cheryl gosipụtara Ọdịnihu nke Ọrụ bụ Ugbu a - You Dị Njikere maka ihe omume ogologo ụbọchị a. Ọ kpọbatara ọ bụghị naanị adreesị isi okwu, kamakwa mkparịta ụka mmechi nke ụbọchị iji bulie uche nke ndị bịara. Anyị nwere ekele maka ikike ya ịgụnye akụkụ nke ọrụ niile nke ụbọchị ahụ na nchikota mmechi ya - ihe pụrụ iche na nghọta na-atụtụ anya na ọdịiche ọdịbendị nke otu ahụ pụtara. Ndị bịara ụbọchị ahụ akọwaala isi okwu Cheryl dị ka ihe na-agba ume ma dị ike. Otu onye kesara na o kere ike dị ukwuu, ọ dị mfe inwe obi ụtọ banyere ihe na-eme n'ime ụlọ ahụ. Isi okwu Cheryl na mmechi bụ ihe dị mkpa n'ọmụmụ ihe ụbọchị anyị dum, na-agbakwunye 'mmeri ya. Anyị ga-atụle ịrụ ọrụ na ya ọzọ ma ana m akwado Cheryl Cran dị ka ọkà okwu maka otu ndị na-eche mgbanwe ma ọ bụ nke ahụ nwere ike ịchọ ịchọpụta isiokwu nke mgbanwe, usoro azụmahịa, ma ọ bụ mkpali. I meela, Cheryl n'ihi na ị nwere ọmarịcha ụzọ n'okwu. ”
L. Masse Elu Elu
“Cheryl bụ ihe zuru oke zuru oke maka nzukọ anyị n’ọdịnihu - anyị nwere otu ndị otu nghọta nke ndị otu na-ahụ maka kredit na-anya isi na ha nọ n’ihu Cheryl na-ama ha aka ka ha chee echiche karịa, iji gbatịa ụzọ ọhụụ ha. wuo atumatu odi niru nke gbakwasiri ukwu na mgbanwe ohuru na oru ndi n’ego. Anyị ga-akwado Cheryl Cran dị ka ọdịnihu nke ọkachamara ọrụ na isi okwu. ”
J. Kile Futures Summit Ebe E Si Nweta Ndị Kachasị Elu Union MN
Ihe ngosi Cheryl banyere Ọdịnihu nke Ọrụ nyere anyị oge mmekọrịta ga-eme ka anyị malite mmemme anyị. Ndị ọbịa anyị hụrụ ndị na-ege ntị n'anya nke ukwuu na omume ndị na-egosi na ha nwere ike ịlaghachikwuru ndị otu ha ozugbo. Ọ tụpụrụ ya n'ogige maka ndị na-ege anyị ntị nke 350 HR, na-ewe ndị ọrụ na ndị ọkachamara na-emepe emepe. "
J. Palm, Onye Nchịkwa TeamKC: Ndụ + talent
“Na mmemme ndị ọrụ anyị na-eme kwa afọ, Cheryl kwuru okwu agbam ume ma na-enye nkọwa banyere ọdịnihu ọrụ na mmetụta ọ na-enwe na anyị. Ọ sooro anyị rụọ ọrụ iji hazie adreesị ya iji hụ na ọ bara uru yana ndị ọrụ anyị. Okwu Cheryl na-akpali akpali ma na-enye ya ezigbo ume. ”
LN, Onye isi ndị isi na PC Pension Corporation
WB, Nnyocha & Development BASF
CEO Ndị ahịa National Agra
Cheryl rụrụ ọrụ na anyị na nke mbụ anyị na-akwapụ obodo. Thelọghachi ahụ lekwasịrị anya na isiokwu sara mbara nke ihe ọhụrụ na mgbanwe ndu. Anyị kpọrọ ndị na-ekwu okwu ka anyị gbaghachi azụ bụ ndị ahịa dị n'ime na mpụga na nzukọ anyị. Enwere ike ịhụ nka Cheryl n'ihe niile gụnyere ịhazi atụmatụ nke ihe omume ahụ na oge ịla ezumike ụbọchị na ọkara. N'oge ezumike ahụ, Cheryl bụ aka ochie n'ịkọkọta ọnụ ma na-enyere onye ndu ọ bụla aka ịkọwapụta ọdịnihu ha na azụmahịa ha. ”
W. Foeman Obodo Coral Gables
“Mụ na Cheryl rụkọrọ ọrụ ọtụtụ ugboro, ihe ọ bụla merenụ na-akụ ya n’ogige ahụ. Ọ na-ege ntị na ihe ị chọrọ na ihe ị na-agbalị ime site na mmemme gị, ọ na-eweta ozi bara uru yana ihe ngosi echefu echefu na-akpali ndị na-ege ntị. Nyocha nke ihe ngosi Cheryl na-abụ akara dị elu mgbe niile. Ọ bụ ezigbo, ike na ọkachamara. Ọ na-anapụta oge ọ bụla! ”
Onye isi n ’CREW Network Foundation
“Anyị kpọrọ Cheryl ka ọ sonyere anyị dị ka ọkà okwu isi na nzukọ 2017 Canadian Association maka Mahadum Na-aga n'ihu na-enwe kwa afọ. Okwu mkpirisi Cheryl “iduzi N'ụbọchị mgbanwe mgbanwe a” zuru oke maka ndị nkuzi anyị. Cheryl kwadebere site n’inyocha ndị bịara anyị tupu oge agafee ma ọ haziri okwu ya iji lebara mkpa anyị pụrụ iche na ọnọdụ anyị anya. Ndị bịara nnọkọ ogbako ahụ nwere ekele maka usoro a a haziri ahazi. Ihe odide Cheryl gbara aka n’uche anyị banyere etu anyị kwesịrị isi mepụta ụbụrụ nghọta dị ka ndị isi mgbanwe na otu anyị kwesịrị isi kwadebe ụmụ akwụkwọ gụrụ akwụkwọ iji dịrị njikere maka ọrụ n’ọdịnihu. Dị Cheryl na usoro mgbanwe yana usoro anọ iji kwalite ndị isi bụ ngwaọrụ bara ezigbo uru nke anyị nwere ike wepu ma tinye ozugbo. Anyị ji ụzọ nkwado ya maka ime ka ogbako anyị nwee nnukwu ihe ịga nke ọma. ”
Dean pro tem ndu gi nile Mahadum Simon Fraser
“Cheryl Cran bụ onye na-emechi isi okwu mkparịta ụka maka njem 2017 Ahụmịhe Ndị Arụ Ọrụ na Atlanta na Chicago, ọ bụkwa ihe ịtụnanya! Ike dị ukwuu imechi ụbọchị ma hapụ ndị bịara na mmụọ nsọ ka ha mee ihe. Ọdịnihu Cheryl nke nyocha ọrụ rụpụtara mkpa ọ dị maka itinye uche na ahụmịhe ndị ọrụ dịka ụzọ isi mepụta ahụmịhe onye ahịa dị ukwuu. O weputara uzo na ndi isi n’ile anya ihu aka oru n’iru. Nzaghachi sitere na ndị bịara ya dị oke mma ma ha hụrụ etu Cheryl si mee ka ha chee echiche! Cheryl bụ ezigbo onye otu egwuregwu. Ihe omume anyị bụ nnukwu ihe ịga nke ọma, anyị na-ekelekwa ya maka nke a. ”
Onye isi ahia Ngwa
N'oge na-adịbeghị anya, anyị nwere ọkachamara banyere Ọdịnihu nke Ọrụ Cheryl Cran dị ka ọkà okwu isi okwu na Nzukọ Kwa Projectwa / Business Analyst Conference kwa afọ, na n'okwu ọ kachasị mma! Ndị bịara anyị gosipụtara Cheryl dịka otu n'ime ndị isi okwu isi okwu na isi okwu ya bụ "Ọdịnihu nke Ọrụ Bụ Ugbu A - 5 Mgbanwe Ọkpụkpụ Maka Ọdịnihu" bụ ihe kụrụ egwu. Ylzọ ndụmọdụ Cheryl banyere isi okwu ya nwere ekele dị ukwuu - ọ gụnyere data e nyochara site na ndị bịara ya na isi okwu nke o nyere azịza na echiche ahaziri iche nke enwere ike itinye n'ọrụ ozugbo maka ndị na-ege ntị. Njikọ nke ike dị ike, iche echiche nke ndu, nke dị adị ma dị mkpa yana nke na-atọ ụtọ na nke na-atọ ụtọ bụ ụzọ zuru oke maka otu ndị ọrụ ọgụgụ ọrụ nghọta na ndị nyocha azụmaahịa. Anyị na-atụ anya ohere iji soro Cheryl rụkọọ ọrụ ọzọ. ”
Onye isi ihe omume otu Ihe omume*BusinessAnalystWorld
“Na nnọchite nke Iwu Innovation Legal na LexisNexis Canada, ọ ga-amasị m ikele gị maka okwu mmeghe gị na Mgbakọ Nnọkọ Mọnde anyị. Nzaghachi anyị natara banyere ihe omume na isi okwu gị, ọkachasị, abaghị uru ọ bụla. Ngosipụta gị bụ ụzọ kachasị mma anyị ga-esi weghachite ụbọchị ahụ, na-atụgharị uche n'ịtụgharị uche n'ụzọ ọzọ. "
Onye njikwa ọrụ Iwu Ndị Innovation Summit Legal
"Anyị nwere Cheryl ebe a," Onye Ndú Nduzi - Mgbagha Silos "na nnọkọ mba anyị nke PRSM na ọ bụ ndị otu ndị bịara nghọta nwere nsogbu. N'ime ọrụ ngwa ahịa, ọtụtụ ndị otu anyị na-ama etu ha ga-esi na-emekọrịta, nweputa ma na-eduga n'ọkwa dị elu. Nnọkọ nke Cheryl nyere nyocha banyere ọdịnihu ọrụ, nghọta na-akpali akpali banyere onye ndu chọrọ, yana echiche dị omimi banyere otu esi egbochi akwa ma wulite ọdịbendị na - emekọrịta ihe na okike. Stylezọ o nwere ike dị elu na iji mkparịta ụka dị ụtọ, ihe nkiri sinima na nghọta vidiyo metụtara. Cheryl nyere oku iji mee ihe na ihe atụ nke 'otu esi' bụrụ onye ndu mgbanwe nwere ike ibute mgbanwe ugbu a yana ọdịnihu ọrụ. N'ihi ọdịnaya siri ike nke Cheryl na ogo dị elu, anyị kpebiri iweghachite ya ịnọ na nnọkọ Nzukọ Afọ Afọ anyị. ”
Onye isi oche nke Ọkachamara Development Mkpakọrịta PRSM
"Anyị nwere nzukọ Gartner kwa afọ maka Data Center, Infrastructure, & Operations ndị ọkachamara na anyị weghachitere Cheryl Cran, ọdịnihu nke ọrụ na mgbanwe onye ndu ndu, iji gosi dịka akụkụ nke usoro ndu anyị. Oge Cheryl ndu @ Isi nke Change ka edere na akwụkwọ zuru ezu ọzọ n'afọ a. Ndị na-ege anyị ntị nghọta nke ndị isi IT na-achọ azịza gbara ọkpụrụkpụ, echiche na mmụọ nsọ dịka a na-ekenye ha ọrụ, na-emetụta ma gbanwee ebe ọrụ ha maka ọdịnihu ọrụ. Cheryl nyefere ihe dị mkpa na ihe ndị ọzọ - nyocha ya na ọnụ ọgụgụ ya, nke e gosipụtara na vidiyo, yana usoro mmekọrịta ya na ndị otu anyị. Anyị na-atụ anya iso Cheryl rụkọọ ọrụ ọzọ. ”
“Cheryl Cran, Ọkachamara Ọrụ Ọrụ na Onye Ọdu Ọchịchị Mgbanwe bụ ihe ịtụnanya na isi okwu ya“ Ọdịnihu nke Ọrụ - Onye ọ bụla bụ Onye Ndu mgbanwe ”- anyị kwuru ihe dị ka“ Cheryl bụ Ọkachasị Isi okwu kachasị mma anyị nwetagoro ”yana “Cherzọ Cheryl nke iji mmekorita ya na ihe ndi na-atọ ụtọ bu ihe egwu”. Onye nke anyị VIP nwere otu akwụkwọ Cheryl akwụkwọ a kpọrọ '' The Art of Change Leadership - Driver Transformation In a Fast Paced World '' ma nwee obi ụtọ ịgwa Cheryl okwu mgbe o mechara akara nke ọ bụla. Cheryl na onye isi ọfịs ya na Michelle bụ ndị otu dynamite - ọ dị mfe iso ha rụọ ọrụ tupu, n'oge na mgbe emechara. Daalụ Cheryl maka inyere anyị aka ịnye ndị bịara anyị AIIM 2017 value bara uru bara uru.
G. Clelland, Ihe omume VP AIIM
“Anyị mere Cheryl sonyere anyị dị ka Ọkà Okwu Nnukwu Mgbakọ maka GEA Conference anyị na Puerto Vallarta na Jenụwarị 2017. Ihe odide Cheryl Ọdịnihu Ọrụ Ugbo bụ UGBUA! bụ nnukwu ihe ịga nke ọma na ndị na-ege anyị ntị nke ịghọta ndị na-ere ahịa na ndị ahịa na ụlọ ọrụ ugbo. Directzọ ya nke na-adọrọ adọrọ ma na-akpali iche echiche na nyocha na-akpali iche echiche mepụtara oghere dị n'etiti ndị otu anyị. Cheryl nyere nghọta banyere ọdịnihu nke onye isi na etu idu ndú si na-agbanwe na nzaghachi na teknụzụ na-arịwanye elu na mgbanwe omume igwe mmadụ. Ọ gbara ndị otu a ume ịmalite usoro ikike ha site n'iwelite 'sistemụ arụmọrụ' ha nke gụnyere ịhe okike karịa, ike na ụsọ ikike iji duzie ndị otu ọgbọ. Strategieszọ o ji nweta ndị ọrụ na ịnwe ya bụ nke mepere emepe ma anyị hụrụ n'anya na ọ nyere 'oku ime ihe' ka ndị na-ege ntị laghachi ebe ha na-arụ ọrụ. Ndị isi anyị bụ Cheryl. ”
CEO GEA Farm Teknụzụ USA
“Cheryl Cran bụ isi okwu anyị nke ogbako Central 1 Credit Union na ọ bụ nhọrọ zuru oke zuru oke! Isi okwu ya dabere na akwụkwọ ọhụụ ya, The Art of Change Leadership bụ kpọmkwem ihe otu ndị otu Credit Union chọrọ. Ọtụtụ n'ime ndị isi ahụ kwuru na ha mụtara ihe ọhụrụ, na ha ji ụzọ Cheryl na-eme maka ọdịnihu nke ọrụ na mgbanwe isi mee ihe. Yndị isi okwu ya na-atọ ọchị, mmekọrịta, na-akpali echiche ma kachasị na-enye echiche bara uru nke ndị isi nwere ike iji mee ihe ozugbo. Cheryl bụ ihe kasị pụta ìhè ná nzukọ anyị. ”
Central 1 Ebe E Si Nweta
Ndị otu Kaiser ọzọ ya na ya rụkọrọ ọrụ kwadoro Cheryl Cran nke ukwuu - anyị wee goro ya n’oge na-adịbeghị anya dịka Onye isi Okwu Mmechi anyị na-emechi nzukọ anyị na-enwe kwa afọ - lee ka o si dabara adaba! Emebere ozi Cheryl nke ọma dabere na azụmahịa anyị, ndị na-ege anyị ntị dị iche iche ma mechie ọgbakọ anyị nke ọma. Ọ nwere ike ịwepụta ọdịnaya sitere na ihe ndị ọzọ nke mmemme ahụ yana tinye n'ime nsogbu ịma aka pụrụ iche nke ndị otu anyị na-eme ma na-enye echiche dị egwu. Ya azụmahịa ndabere na ahụmahụ na ya kensinammuo nghọta na ike nnyefe nyere anyị otu na mmụọ nsọ na bụ a kediegwu ụzọ kechie anyị ogbako! ”
VP Federal Employee Uru Kaiser Permanente
“Cheryl Cran abụghị Sheryl Crow ma ọ bụ kpakpando na-enweghị atụ ọ bụla! Anyị nwere Cheryl dịka onye isi okwu okwu mmechi anyị maka usoro mmemme maka ndị otu anyị. Cheryl sooro anyị rụọ ọrụ ihe karịrị iri na abuo ebe ọ nyefere ndị ndu 6000 ka ọ dịrị ndị ga-akwado ya. Ikike ya iji kpaa na ozi nke ndị ọzọ na-eweta ya, ikike ya iso ndị otu ahụ na-eme ihe ọchị, na-atọ ọchị, eziokwu na nke na-akpali agụụ mmekọahụ bụ ihe ịtụnanya na kpọmkwem ihe anyị chọrọ dịka nso ihe omume anyị.
“Cheryl Cran bụ ụbọchị mmechi 2 nke anyị maka nzukọ ọgbakọ kwa afọ nke September 2016 na okwu 'WOW!' Cheryl na-eweta ume dị egwu, nghọta, echiche ndị bara uru na ọtụtụ ihe ndị ọzọ n'akwụkwọ nkọwa ya. Ndị otu anyị hụrụ ya n'anya n'ụzọ na ntinye ya gụnyere inwe ederede ederede nke ndị na-ege ntị ma jiri igwe mgbasa ozi jụọ ajụjụ ya n'oge o kwuru okwu ya - hip! Ọ chịrị anyị ọchị ma mee ka anyị lelee onwe anyị anya iji mara ma ànyị na-abụ ndị isi mgbanwe. Hụrụ n'anya na mmekọrịta dị n'etiti ndị na - ege ntị yana ụdị ndị nwere ike dị egwu nke na - enye ndị mmadụ 'otu esi eme ihe ọhụụ na otu esi enwe mmegharị maka ọdịnihu ọrụ. Onye ọ bụla hapụrụ nnọkọ ya nwere mmetụta nke ike, nwee ume ma dị njikere imezi ihe ọdịnihu ugbu a! ”
J. Moore Ndị otu ọkachamara n'ihe banyere ahụike BC
Cheryl Cran bụ ọkà okwu isi okwu na Nzukọ Ndị Ọrụ anyị - na otu okwu ọ dị 'ebube'. Isi okwu ya "Na-eduga Mgbanwe na Ọrụ Ngwaọrụ Na-ahụ Maka Ọgwụ na Ahụhụ," zuru oke maka otu ndị ọkachamara n'ịgwọ ahụike. Ndị mmadụ hụrụ ya n'anya ngwa ngwa na nnyefe nnyefe yana ụdị ya gosipụtara 'otu' ga - esi bụrụ onye ndu mgbanwe na nka ndị achọrọ. Nlekwasị anya na ezigbo ihe okike dị mkpa maka otu a na ihe ndị ahụ nyere onye ọ bụla ụfọdụ ihe bara uru iji tinye n'ọrụ na ọrụ ahụ. Yldị Cheryl ihe ọ na - ekwu maka - tupu, n’oge na mgbe isi isiokwu ọ gbanwere ma dịkwa mfe ịrụ ọrụ. Anyị ga-akwado Cheryl maka nzukọ gị! ”
Tricia Chiama, Onye Nchịkọba Sr., Ọrụ Mmụta na Mmụta Na-ahụ
“Cheryl Cran bụ isi ihe dị mkpa nye Nzukọ Nzukọ Kwa Afọ anyị, na-eweta ume na obi ụtọ dị ka onye isi okwu isi okwu anyị na mmeghe na mmechi nke ogbako anyị. Cheryl kesara nghọta ya na ihe ọmụma banyere ọdịnihu ọrụ na mgbanwe ndu, na-eme ka ngosipụta ya na ndị ahịa na ndị na-ege anyị ntị. Anyị so ya rụkọọ ọrụ iji hụ na nzaghachị ahụ na-aga n'ihu, kwekọọ, ma nwee nnukwu uru maka ndị otu anyị. O nyere aka gbaa ndị otu anyị ume, na-ahapụ ndị mmadụ echiche ha nwere ike itinye n'ọrụ ozugbo n'ụwa na-agbanwe n'ike n'ike na ebe ọrụ taa. Obi dị anyị ụtọ na anyị nwere Cheryl dị ka isi okwu anyị ma na-ekele ya maka onyinye ya na-akpali anyị ịkwado ma mee ihe dị iche iche iji nweta ihe ịga nke ọma n'ọdịnihu. "
Pat Kramer, Onye isi BDO Canada
“Cheryl Cran bụ onye isi okwu anyị na Ọgbakọ SilkRoad anyị na-eme kwa afọ yana n’otu okwu ọ kachasị mma! Ndị Cheryl na-ege ntị na teknụzụ bụ ndị Cheryl gosipụtara ma nyefee ọdịnaya dị oke mkpa, bara uru ma dị mkpa gbasara mgbanwe mgbanwe na ọdịnihu nke ọrụ. Cheryl gbara anyị niile aka 'ịkwalite OS anyị na-edu ndú' yana iji mepụta ihe okike anyị oge.Ọ nyere ndị na-ege anyị ntị nghọta ka ha ghọta otu ha ga - esi duzie ma jikwaa mgbanwe mgbanwe. "
J. Shackleton, Onye isi ala SilkRoad
“Cheryl bụ otu n'ime ndị kwuru okwu na isi okwu nzukọ ndị isi nzukọ kwa afọ - Cheryl isi okwu Ọdịnihu nke Ọrụ Bụ Ugbu a bụụrụ ndị otu anyị ezigbo mma. Thelọ ọrụ ego nwere nnukwu mgbanwe na ọgba aghara - Cheryl nyere nyocha na akụrụngwa maka ndị isi anyị iji bulie okike na ihe ọhụrụ mgbe ha na-ekpori ndụ. Ozi ya nyere aka ichetara anyị ihe ndị anyị kwesịrị ime kwa ụbọchị dị ka ndị isi nke ga-agba ume ito na ihe ọhụrụ. Vidiyo a nwere onu ogu na ihe omuma banyere ihe omumu o nyere banyere ulo oru ndi n’iru isi oru uzo oru odi n’iru n’enye aka nyere onodu ihe anyi n’eme nke oma na ihe anyi puru ime n’ihu. A kpaliri ndị otu ndị ndu anyị nwere nghọta ma Cheryl na -efe ozi ndị bụ isi site na ndị kwuru okwu gara aga na-eme ka ọ bụrụ nnukwu mmechi okwu maka ogbako anyị! ”
L. Skinner Onye isi ala mbu West
"Anyị nwere Cheryl dị ka onye isi okwu anyị na okwu ya bụ" Ọnọdụ Ndị Nwee Ike - Nzuzo Na-arụpụta Ọrụ na Ọrụ na Ebe Ọrụ "nabatara ndị nnọchi anya anyị nke ọma. Ihe nyocha tupu ihe omume Cheryl, bụ nke anyị zipụrụ n'aha ya, nyere ya ohere ịhazi usoro ihe omume ya ma dabere na nzaghachi nke ọ natara, ọ mepụtara ihe ngosi nke jupụtara n'ike dị ukwuu site na mbido ruo na njedebe. Nnyocha nke Cheryl banyere ọdịnihu nke ọrụ na atụmatụ ya banyere otu esi eduga mgbanwe site na iji ike eme ihe na-eduga. Daalụ Cheryl! ” T. Tse Manager, Omume Ndi oru nlezi anya ndi Chartered nke ndi British Columbia
Isi okwu Cheryl Cran bụ "Ọdịnihu nke Ọrụ - You Dị Njikere" kwekọrịtara n'ụzọ zuru oke na isiokwu ọgbakọ HRIA 'Na-agagharị Ọganihu na Busts'. Cheryl wepụtara oge iji mata ndị bịara anyị nke ọma tupu o nyefee isi okwu mmechi a ahaziri nke ọma. Ihe nyocha tupu nzukọ nke Cheryl na ọbịbịa ya n'ụtụtụ nke nnọkọ iji lelee ngosi nke ụbọchị iji kpaa ọdịnaya ha n'ime okwu mmechi ya pụtara ìhè. Ihe Cheryl ji eme nnyocha, ngwa ọrụ siri ike iji nyere anyị aka etu esi eme ya na etu anyị si emekọ ihe ọnụ bụụrụ ndị anyị nwere nghọta. O tinyere ndi otu ahu site na ajuju ederede na ihe omuma anyi nke Twitter na-aga n’oge na mgbe ya gachara. Cheryl bụ ihe na-atọ m ụtọ ịrụkọ ọrụ. ”
J Chapman, CMP Resourceslọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọha na Akụ nke Alberta
“Cheryl Cran kụrụ ya na ogige! Cheryl bụ mmalite mmeghe na nnọkọ nzukọ kwa afọ anyị na Eprel 1st, 2016 ma bụrụ mmalite zuru oke ruo ụbọchị. Ọ na-adọrọ adọrọ, na-akpali, na ọtụtụ ọchị niile! Ozi ya bụ isiokwu ma bụrụkwa nke bara uru na ebe ọrụ na - agbanwe agbanwe taa. M ga-akwado ya nke ukwuu maka ọgbakọ unu! ”
Onye isi oche CUMA
“Ana m ekelekwa ọzọ maka nnọkọ ịtụnanya ụnyaahụ. Ìgwè mmadụ m siri ike ime ihe na-amasị m, m natara ọtụtụ nzaghachi ziri ezi ozugbo okwu gị gachara. Had meela ka ndị otu ahụ nwee ume, na-ege ntị ma na-ekere òkè na nzukọ ikpeazụ nke ụbọchị 2 kickoff. Ọ bụghị ọrụ dị mfe. Aga m akwado gị n'oge ọ bụla! Ana m ekele gị ọzọ, enwere m olileanya na ụzọ anyị nwere ike ịgafe n'ọdịnihu dị nso. ”
Ihe Ngwọta Mgbasa Ozi CBC & Radio-Canada
“Cheryl Cran bụ onye na - ekwu okwu oriri ehihie na nnọkọ nzukọ anyị nke NoHRC 2016 - isi okwu ya na Onye isi 2020 - Mgbanwe Onye isi maka Ọkachamara HR ziri ezi maka ndị otu ọkachamara HR! Ozi ya banyere idu ndu mgbanwe na ịdị njikere maka ọdịnihu ọrụ ugbu a bụ ihe anyị niile nụrụ. Cheryl mere ka ndị na-ege anyị ntị tinye aka, na-emekọrịta ihe, na-eme iwe iwe ma zigara ya ajụjụ ndị ọ zara ozugbo na nchebara echiche. Anyị nabatara nzaghachi dị mma site n'aka ndị bịaranụ - anyị ga-ekwenye nke ọma Cheryl Cran maka ogbako ma ọ bụ ihe omume gị! "
Onye isi oche NOHRC Conference 2016
"Anyị nwere Cheryl Cran dị ka onye isi okwu okwu anyị maka nzukọ ndị ahịa anyị n'oge na-adịbeghị anya na ozi ya nke" Na-eduga Mgbanwe Na Ọrụ Pacgba Ọsọ & Ọrụ Nkà na ”zụ "dị na isi. Anyị chọrọ ka ndị na-ahụ maka ọgbara ọhụrụ na ndị ọkachamara maara ihe nwere ike izi ndị ahịa anyị ozi ga-agbakwunye ha uru na ụlọ ọrụ ahụike ma nyekwa ha ọrụ mgbanwe ọrụ. Cherdị Cheryl nke ịnụ ụtọ mgbe ọ na-ezipụ ozi dị mkpa ma dị oke mkpa nke usoro 'ịkekọrịta onye ndu', na-arụkọ ọrụ na ọgbọ na ịmịzụ teknụzụ nke ndị bịara anyị ji ịnụ ọkụ n'obi nabata. Anyị rịọrọ maka 'wepụ' ozi enwere ike itinye n'ọrụ yana Cheryl nyere anyị nke ahụ na ndị ọzọ - anyị ga-eso Cheryl rụkọọ ọrụ ọzọ ".
Oche / Ọhazi Njikọ nlekọta nke nlekọta afọ iri na ise nke Crowe maka nlekọta ahụike 2015
“Cheryl Cran bụ onye na-ekwuchitere okwu okwu maka Hospitality Leadership Forum, akụkụ nke International Hotel, Motel & Restaurant Show. Ndị na-ege anyị ntị nke ndị isi ụlọ ọrụ ile ọbịa na ụmụ akwụkwọ nabatara ozi Cheryl nke 'ịkekọrịta onye ndu' na mkpa ọ dị iji bulie sistemụ arụmọrụ ya. Ihe ngosi Cheryl nwere otutu ma na-enye ekele maka mmekorita ndi na-ege ya nti, ihe ọchị, na teknụzụ. Cheryl gbara ndị bịara ya ume ka ha dee ederede na tweet n'ogologo - nnukwu mmụba na ọkwa nke njikọ aka. Nzaghachi nke ndị bịara anyị nyere anyị dị oke mma, ọ bụ ezigbo ihe mgbakwunye na mmemme ọgbakọ anyị. ”
K.Moore, Director Convention & Ihe omume Hotellọ oriri na ọ Hotelụ Americanụ American & Lodging American
Cheryl Cran kwadoro nzukọ kwa afọ nke Strategy Executive anyị na February 2014 ma anyị nwere obi ụtọ na nsonaazụ. Site na enyemaka Cheryl anyị nwere ike ilegharị anya ma nweta nghọta doro anya na ozi akara anyị na ndị ahịa anyị, ihe kwesịrị ime n'ime iji mezuo nkwa ahụ na ihe anyị dị ka ndị isi ọrụ ga-agbanwe iji duru ụlọ ọrụ ahụ gaa n'ọzọ nke ọma. . Cheryl nọrọ oge mụ na ndị otu ahụ tupu nzukọ ọgbakọ na usoro nke nzukọ ọgbakọ iji kpokọta ntinye na data iji nyere aka wee mepụta ntụzịaka usoro nzuko. O mepụtara nyocha ịntanetị iji kpokọta ozi na echiche onwe onye banyere ihe ịma aka na ohere maka ụlọ ọrụ na otu ndị isi ọrụ lere ọdịnihu anya. Cheryl nwere ikike pụrụ iche iji kpokọta data na ọdịnaya dị ukwuu, sụgharịa ya wee nye ụzọ doro anya ma dị mfe nke na-enyere ndị isi na azụmaahịa ahụ aka ito. Stylekpụrụ ya dị mma ma na-atọ ọchị ma ọ nwere nghọta miri emi banyere uto onwe onye ọ bụla chọrọ ka onye ọ bụla wee nwee ike itinye aka na ọkwa dị elu maka ebumnuche ụlọ ọrụ ahụ. Cheryl dị ka onye ndu ndu bụ ọkachamara, na-arụpụta ihe ma na-arụpụta ihe anyị na-atụ anya ka anyị na ya rụkọọ ọrụ ọzọ. ”
Ron Laudner, Onye isi ala Nkwukọrịta Omnitel
“Nkọwa Cheryl Cran nye ndị otu anyị, ndị isi anyị na ndị ọzọ nọ n'otu okwu, TIMELY! Anyị nwere ọgbakọ ndị isi ọgbakọ anyị na-eme kwa afọ ma Cheryl bụ onye kwuru okwu mmechi maka ụbọchị abụọ anyị. Ikike ya na-etinye na ọdịnaya dị ugbu a na ọnọdụ ụlọ ọrụ yana ugbu a n'ụzọ na-atọ ụtọ, ọgụgụ isi na echiche na-akpali. Anyị enwetara nzaghachi dị mma sitere na oge Cheryl na-ekwu na ozi ya bụ ihe kacha mma maka ihe omume ụbọchị abụọ ahụ nakwa na ha nwere mmụọ nsọ ma dị njikere ịgbanwee usoro ha n'ọrụ ha n'ihi nke ịnụ ya. "Cheryl wetara nyocha, ikike ijikọ, ọgụgụ isi ụwa na ihe ndị ọzọ iji nyere aka mee ka ogbako anyị nwee ihe ịga nke ọma."
Isi okwu Cheryl Cran na mgbanwe Lead na 2020 Vision ziri ezi na ego ahụ! Ndị otu anyị nke EO Arizona bụ ndị ọchụnta ego bụ ndị nwere ọchụnta ego na-aga nke ọma ma ọdịnaya ha gosipụtara na ngosipụta Cheryl na-azụ ahịa. O nwere ikike pụrụ iche iji zoo ụdị ndị otu - anyị nwere ihe karịrị ụlọ ọrụ iri na atọ nọ na - ege ntị - ma ọ nwee ike ịnye oke nyocha nke na-akwado mkpa ọ dị maka ndị isi azụmaahịa iduga mgbanwe iji bulie azụmaahịa na-eji nke ọma. nkwukọrịta nkwukọrịta na ọtụtụ mpaghara ọrụ gburugburu. “Nzọụkwụ ya nke mgbanwe gbanwere teknụzụ leverage, iji usoro mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, tinye igwe sistemụ arụmọrụ yana ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Nzaghachi nke ndị otu anyị na - azụmaahịa bụ ndị bịara bụ na ha chere na Cheryl's Keynote nyere ha uru kachasị n'ụlọ karịa karịa ihe ọ bụla ha gara na ihe mmụta gara aga. "Anyị ga-arụ ọrụ Cheryl ọzọ!"
Executivetù Ndị Isi, Arizona Vantage ezumike nká atụmatụ
“Cheryl Cran bụ onye na-ekwuchitere anyị okwu mmechi na nzukọ anyị GAM maka ndị nyocha n’ime ime ụlọ - leenụ ka nke a si dị! Ihe ngosi ya banyere Leading Change hụrụ maka nsogbu na ohere ndị isi anyị na ụlọ ọrụ anyị. Nnyocha ihe omume Cheryl tupu oge a chịkọtara ọgụgụ isi nke ndị na-enyere ya aka ịhazi nkọwa ya nke ọma. Na mgbakwunye, ọ gafere ma gafee site na nyocha ihe ngosi dị n'ihu ya iji tinye ihe ndị dị mkpa na nkwupụta ya. Ọ na-atọ ụtọ, na-eduzi ma na-enye usoro ịkwa iko na-akpali akpali maka otu anyị. Hụrụ ya n'anya na o nyere "ihe omume" na njedebe maka ndị mmadụ iji wepụ echiche na imejuputa usoro omume ha. Ana m akwado Cheryl maka ihe omume gị ma ọ bụ nzukọ gị. ”
Onye isi, Nzukọ Ulo nke Oru nyocha nke ime
“Cheryl Cran bụ onye isi okwu anyị n’ụbọchị nke abụọ nke nzukọ anyị UniverCITZy maka BC Ministry of Technology, Innovation and Citizens’ Services na ọ rụkwara ụlọ ọrụ na-esochi yana gwa ndị isi anyị na nri ụtụtụ. Isi okwu nke Cheryl na 2 Vision ya na ulo akwukwo ya Onye ndu ndi ozo bu ihe puru iche! O nwere ndị na - ege anyị ntị na - ebi ma na - ebi ndụ n’ime obodo na - achọ ihe. Deliverydị nnyefe pụrụ iche nke Cheryl gụnyere ijikọ ngwa ngwa na mmekọrịta chiri anya na otu ahụ, na-enye echiche dị omimi na echiche na-akpali akpali, echiche bara uru na azịza maka anyị iji mejuputa. Egwú ya mere ka anyị na-agba egwu n'oche anyị, mmekọrịta ya na anyị nwere mmekọrịta na ọdịnaya mere ka anyị gbasaa echiche anyị. Anyị ga-eso Cheryl rụwa ọrụ ọzọ! ”
S. Biblow, Onye Ndụmọdụ Kachasị, Ndị Mmadụ & Ọrụ Ntinye Ọrụ nke teknụzụ nke BC, Innovation na Ọrụ nke ụmụ amaala